Yakanakisa Kunyoreswa Mumiriri Services
Nyika dzese dzine chisungo chepamutemo chemabhizinesi kuve nemumiriri akanyoreswa. Izvi ndezvechokwadi kutanga, mabhizinesi madiki, maAdvs, uye makambani.
Chii chinonzi mumiririri akanyoreswa?
Aya masevhisi anobatsira kuverengera kuzere nehurongwa hwako panguva yekutanga-uye refu-yakareba maitiro ekushanda kwako. Ivo anowanikwa panguva dzebhizimusi maawa kubata tsamba nevamiriri vehurumende pachinzvimbo chako. .).
Kutadza kuchengetedza yakanyoreswa sevhisi sevhisi kunogona kukuvadza bhizinesi rako. Mune zvimwe zviitiko, nyika inogona kuputsa bhizinesi kubvumidza ayo akanyoreswa mumiririri masevhisi kupera.
Invamwe vanoti iwe unogona kuita seako wega akanyoreswa mumiririri. Asi izvi zvinoreva kuti uchafanirwa kutora mabasa aya uye kugara uchiwanikwa panguva dzebhizinesi. Inofumurawo ruzivo rwako rwevanhu kuruzhinji, urwo vanhu vazhinji vanoda kunzvenga. Kunyangwe iwe urikutanga bhizimusi nyowani kana uchida kushandura mumiririri wako akanyoreswa, iri gwaro rinokubatsira iwe kuwana yakanakisa yakanyoreswa sevhisi sevhisi kune rako bhizinesi.
Wepamusoro 6 Akanyoreswa maAgent Services
Mumiririri akanyoreswa kuchamhembe kwakadziva kumadokero
- Yakanakisa sevhisi sevhisi
Kushanyira Northwest RA Kubva ku $ 125
Kutamisa Mahara Mahara g Kambani Inotungamira
Mafomu Ekutanga-akazadzwa Mafomu
Ne "akanyoreswa mumiririri" muzita, hazvishamise kuona
Northwest Akanyoreswa Mumiriri
chinzvimbo chakakwirira kwazvo pane yedu rondedzero.
Kubva pakutanga bhizinesi rako kuchengetedza bhizinesi rako nemagwara ekambani, Anopa sevhisi akanyoreswa mumiririri masevhisi ari echipiri kune ese. Kune ma LLC uye makambani, Northwest yakanyoreswa mumiriri ichave yekutanga sarudzo yekufunga.
Vane zvese zvaungade kana zvaunoda nebasa rakanyoreswa mumiririri. Chirongwa ichi chinosanganisira mabhenefiti akadai se: Mafomu ekutanga-akazadzwa mafomu
Chirevo chegore negore zviyeuchidzo
Gwaro kuongorora uye kuchengetedza
Kuzvishandira online kuwana
Kutumira tsamba pasina muripo
Zuva rimwe chetero scans
Iwe unozowanawo rutsigiro rweupenyu hwese kubva kuNorthwest Registered Agent guides kambani. Nyanzvi dzekutengesa idzi dzichakubatsira kutanga nekuchengetedza bhizinesi rako nerutsigiro rwunopfuura kudarika kwetsika kwemumiririri akanyoreswa.
Basa rinodhura $ 125 pagore. Kana iwe uchida mumiririri akanyoreswa mumatunhu mashanu kana anopfuura, mwero unodonha kusvika pamadhora zana.
# 2 - Incfile - Yakanakisa Yemahara Akanyoreswa Mumiriri Services
Yemahara yakanyoreswa mumiririri kwegore rimwe Kuvandudzwa pa $ 119
Kutumira tsamba zvoga
Kutumira neemail neSMS
ibasa rekugadzira bhizinesi riine huwandu hwakawanda hwekupa. Yakave ichishandiswa nemabhizimusi anodarika mazana mashanu ezviuru mumakore gumi nemashanu apfuura. Chimwe chezvikonzero Incfile chakakurumbira ndechekuti unogona kuzvishandisa kuwana mumiririri wemahara. >
Ndizvozvo. Kana iwe ukashandisa Incfile kuumba yako LLC kana kambani, iwe unowana yemahara yakanyoreswa mumiririri yegore rekutanga. Ivo vane yekupinda-chikamu cheSilver package iyo chaiyo inodhura $ 0. Iwe chete unofanirwa kubhadhara mari yehurumende. uye Platinum zvirongwa zvinotangira pamadhora zana nemakumi mapfumbamwe nemapfumbamwe nemadhora mazana mapfumbamwe nemapfumbamwe, maererano. Asi vese vatatu vanouya neyemahara yakanyoreswa mumiririri. Heino tarisa zvimwe zvezvinhu uye simba reIncfile rakanyoreswa mumiriri sevhisi.:
Inowanikwa kuti ugamuchire tsamba dze IRS tsamba uye kutongwa kwepamutemo pachinzvimbo chako
Email uye ma ziviso eSMS paunogamuchira magwaro
24/7 kupinda pamhepo
Nyore uye inonzwisisika padheshibhodhi online
otomatiki kutumira tsamba
Iyo yepamhepo dhibhodhi Incfile mutsetse unonyatso kumira kunze kune zvimwe zviri pamusika nhasi. Pakati pekutumira tsamba uye kunyeverwa, iri ibasa chairo rakasarudzika.
Mutengo wakatarwa weIncfile's yakanyoreswa mumiriri sevhisi iri $ 119. Kana iwe ukasaina imwe yehurongwa hwebhizinesi, chirongwa chako chinozovandudza pamwero iwoyo mushure megore rekutanga remahara. mari yehurumende.
Chenjera kutanga bhizinesi uye uwane yemahara yakanyoreswa mumiririri
# 3 - Swyft Filings - Agen servicesyakanyanya kuita basa yakanyoreswa ts
Shanyira Swyft Filings Vamiririri vakanyoreswa kubva pamadhora zana nemakumi masere nepfumbamwe Rakareruka inion
Kuwana zvinyorwa zvepamhepo Kuvanzika nekuteerera kunovimbiswa
Rimwe zita rinozivikanwa uye rakavimbika mune yakanyoreswa mumiriri nyika. Ivo vanopa masevhisi kune maAdvs, C-Corps, S-Corps, nemasangano asiri epundutso.
Saka zvisinei nerudzi rwechinhu, saizi yebhizinesi rako kana yako indasitiri. Chiitiko, ichi chichava chakakura. sarudzo yekufunga. Swyft Filings ine yakanyoreswa mumiriri masevhisi anowanikwa mune ese makumi mashanu matunhu.
Kutanga kuri nyore. Ingo zadza nekukurumidza online remibvunzo yekunyoresa. Paunenge uchinge wanyoreswa, Swyft Filings inoshandisa otomatiki tekinoroji iyo inokutumira iwe zviyeuchidzo panguva yakakodzera kuti uone kutevedzera. Basa rachoinotanga pa $ 149 uye inovandudza otomatiki. Saka haufanire kunetseka nezvesevhisi yako ichipera.
Iwe unongobhadhara bundu remari uye haufanire kunetseka nezvezvakavanzika mari kana imwe mari yekuwedzera.
Swyft Filings inokutendera kuti nyore kuona zvinyorwa zvepamutemo zvakaiswa online neako akanyoreswa mumiririri. Sevhisi yakachengeteka, yakavimbika uye inochengetedza zvakavanzika zvako.
Zvinofanira zvakare kucherechedzwa kuti Swyft Filings inopawo akati wandei mabhizinesi ekutanga-up marongero aunosarudza kubva. Aya mapakeji anotanga ne $ 49 chete pamwe nemari dzehurumende. Nekudaro, mumiririri akanyoreswa haabatanidzwi mumasevhisi aya.
Kubva ku $ 99
Zvinosanganisira zvirongwa zvekudzidzisa Kuwana zvinyorwa zvepamhepo Chakavanzika uye Kudzivirirwa
nderimwe remazita anozivikanwa uye ane mukurumbira mumunda wekusika bhizinesi. Ipo iyo kambani ichinyatso kuzivikanwa kune avo ma LLC ekugadzira masevhisi, ivo zvakare vanopa akanakisa akanyoreswa mumiririri masevhisi. zvekare. LLC. Inowedzerawo rukoko rwekuvanzika nedziviriro kubhizimusi rako.
Akanyoreswa mumiriri masevhisi anotanga pamadhora makumi mapfumbamwe nemapfumbamwe pagore.
Asi kana iwe uri kushandisa ZenBusiness kutanga yakoSekambani, avo vakanyoreswa mumiriri masevhisi anosanganisirwa nechero hurongwa. Aya marongero anotanga ne $ 129, saka zvine musoro kuti ubatanidze sevhisi pamwe chete. >
# 5 - MyCorporation - Inofanirwa nemabhizimusi madiki
Kutanga pa $ 120 Yemahara EIN dhipoziti pamwe nekudzidziswa RA inosanganisirwa nemamwe mapakeji ekudzidzisa
kwave kutenderera kweanopfuura makore makumi maviri. Kubva 1998, ivo vakabatsira kugadzira mabhizimusi anodarika miriyoni mumatunhu ese makumi mashanu.
Semapiyona uye mutungamiri mune ino indasitiri, mabasa eMyCorporation akanyoreswa mumiririri akakwana kumabhizimusi madiki ekutanga.
Kutanga kuri nyore. Ingo enda kune webhusaiti uye zadza fomu rinokurumidza namutsara. MyCorporation inopa yakanyoreswa mumiriri masevhisi kune maAdvs nemakambani. Hezvino izvo zvaunowana neiri sevhisi:
Gamuchira zviri pamutemo uye zviri pamutemo magwaro akamirira iwe
Ronga zvinyorwa zvako
Kutumira magwaro epamutemo kune muridzi webhizinesi
Gamuchira sevhisi yekugadzirisa bhizinesi rako kana 'mutemo uchiitwa
Mumiriri akanyoreswa masevhisi kuMyCorporation anotanga ne $ 120. Iyo mwero inovandudza otomatiki gore rega. Iwe unogona zvakare kuwedzera MyIncGuard kuchirongwa chako, icho chinosanganisira zviyeuchidzo uye maturusi mukati megore. Kune avo venyu vanotanga bhizinesi idzva, vakanyoreswa vamiririri masevhisi vanopihwa. Izvi zvinotanga pa $ 224 uye $ 324, zvichiteerana. Kana iwe ukashandisa MyCorporation kutanga bhizinesi rako,
iwe unowana iyo EIN dhipozitiyemahara
# 6 - MyCompanyWorks - Yakanaka yekushandura vamiririri vakanyoreswa
Kutanga pamadhora 99
Hapana shanduko mumitero yemumiririri
Kambani yekudzidziswa yeVacheche neCorps
MyCompanyWorks ndeimwe sarudzo inozivikanwa mumunda wekusika bhizinesi. Ivo vanopa kudzidziswa uye vakanyoreswa mumiririri masevhisi kune maAdvs, c-zvitunha uye s-zvitunha.
Kubva 2001, makambani anodarika makumi matanhatu munyika yose akavimba neMyCompanyWorks pamabasa avo.
MyCompanyWorks inopa masevhisi kumumiriri akanyoreswa mumatunhu ese makumi mashanu. Ini ndinoda MyCompanyWorks nekuti zvine mwero kwazvo. Iwo masevhisi akakwana kune chero munhu anotanga bhizinesi idzva pamwe nevaridzi vemabhizinesi vanoda kushandura mumiririri wavo akanyoreswa kubhizinesi ravo.ise iripo.
Mabhenefiti evakanyoreswa vamiririri masevhisi kubva kumupi uyu anosanganisira:
Ivai nechokwadi chekuteerera zviri pamutemo
Gamuchira tsamba panzvimbo yako
Nyore online gadziridza
ziviso dzazvino dzekuendesa maitiro, mafomu, nezvimwe. Yakawedzera dura rekuvanzika pakati peako kutenderera uye ruzivo rwebhizinesi
Kunyoreswa mumiririri sevhisi inotanga pa $ 99 pagore.
Kana bhizinesi rako ratosimbiswa uye iwe uri kutsvaga kushandura mumiririri wako akanyoreswa, MyCompanyWorks haina. t inobhadharisa zvimwe zvechinjo. Neimwe nzira, iwe unogona kuwedzera sevhisi kune imwe yemamwe marongero ekudzidzisa, anotanga kubva pamadhora makumi manomwe nepfumbamwe.
zvirongwa zvinotsigirwa nemazuva makumi mapfumbamwe ekudzoserwa mari
. Maitiro ekuwanar iwo akanakisa akanyoreswa mumiriri masevhisi ako Kupesana nekutenda kwakakurumbira, haasi ese akanyoreswa mumiriri masevhisi akafanana. Dzimwe dzesarudzo idzi dziri nani pane vamwe. Uine sarudzo dzakawanda kwazvo dzekufunga nezvadzo, zvinogona kunetsa kuwana yakanakisa sevhisi sevhisi kune rako bhizinesi. Kuchengeta zvinotevera mupfungwa paunenge uchifamba zvichaita kuti hupenyu hwako huve nyore: Rudzi rweBhizinesi Bhizinesi
Nderupi bhizinesi rauri kutanga? Kana ndeupi rudzi rwesangano rauinaro parizvino? LLCs haigone kushandisa imwechete yakanyoreswa sevhisi seS-Corp. Vamwe vamiririri vakanyoreswa zvirinani kumasangano but isingabatsiri.
Chera zvakadzama zvishoma kuti uone kuti ndeapi marudzi ezve zvinhu zvakanyoreswa mumiririri zvaunoronga kushanda nazvo. Kana vari kushanda nemakambani akafanana neako, iyi inofanirwa kunge iri mhinduro yakanaka.
Tsvaga sevhisi iyo inokutumira iwe maSMS kana maemail zviyeuchidzo kuti uve nechokwadi chekuti hauna kupotsa chero nguva dzakatarwa kana zvinodiwa. Mamwe masevhisi anouya kubva kune zvekuwedzera zvinhu uye gwara rekutevedzera. Zviri nyore kutaura musiyano uripo pakati peyakanyoreswa mumiririri sevhisi iyo inongoita iyo shoma shoma uye idzo dzinoenda mamaira ekuwedzera. mumiririri akanyoreswa. Kero yemumiririri yakanyoreswa inozo nyorwa seyakavanzika yeruzhinji, kwete yako kero yepamba kana yehofisi.
ZvinyorwaKunyorerana zvemutemo nehurumende kunogona kuverengerwa kuburikidza neako akanyoreswa mumiriri. Vamwe vachapa kutumira tsamba kupesana nekungochengeta tsamba chete. Vamwe vanoisa zvakachengetedzeka zvinyorwa kune online dashboard yaunogona kuwana kure.
Bhizinesi Rekuvandudza Services
Ruzhinji rwevanhu vari kutsvaga rakanyoreswa sevhisi sevhisi vari kutanga bhizinesi idzva. Zvinoita zvine musoro kushandisa chete kambani imwe chete kune ese masevhisi. Vamwe vachapa gore remahara emasevhisi akanyoreswa emumiriri paunosaina chirongwa chekutanga.
Kana iwe uchitova nebhizinesi riripo uye uchingoda kushandura mumiririri wako akanyoreswa, masevhisi ekutanga bhizimusi usave wakakosha
Mutengo wemasevhisi akanyoreswa mumiriri unowanzo donha kutenderera madhora zana pagore. Unogona kuwana mamwe madhora makumi mashanu kana kudarika. Asi kazhinji kutaura, haufanire kunge uchibhadhara zvakanyanya.
Mamwe makambani anoshandisa gweta ravo seanyoresa mumiririri. Asi zvinoda mari yakawanda zvakanyanya uchienzaniswa nemasevhisi akaongororwa mudhairekitori iyi. kuita reshiyo.
Mumiriri wako akanyoreswa anofanira kunge aripo kuti akubatsire kana iwe uine chero mibvunzo kana uchida rubatsiro. ichi chakakosha uye chinowanzo kufuratirwa cheanyoresa basa rekuongorora mumiriri. Ndinokurudzira kuti iwe uverenge kuongororwa kwevatengi usati waita sarudzo yekupedzisira. Vazhinji vaongorori vanotaurauchave nechokuita nerubatsiro (rungave rwakanaka kana rwakaipa). Aya mazwi anogona kubatsira kukukanganisa nenzira imwe kana imwe kana iwe uri pakati pesarudzo dzakawanda. Zvinoenderana nezvaunenge uchitsvaga.
Northwest Akanyoreswa Mumiriri ndiyo yedu yepamusoro sarudzo kune vatengi sevanoenda pamusoro nekupfuura kuzadzisa zvaunoda. Incfile inopa emahara akanyoreswa ejenti masevhisi kana iwe uchinyorera kune bhizinesi kutanga-up package. Swyft Filings inoronga kugadzirisa mhando dzese dzemabhizinesi. Kana iwe uri kugadzira iyo LLC, tarisa kune vakanyoreswa mumiriri masevhisi anopiwa neZenBusiness Mabhizimusi madiki anofanirwa kuenda kumasevhisi eMyCorporation. Kune avo vamuri kutsvaga kushandura vakanyoreswa vamiririri, MyCompanyWorks haibhadharise switch switch mumiririri.Kana zvirizvo, unogona kuwana yakanakisa yakanyoreswa sevhisi sevhisi kwauri nekutevera kurudziro iri mugwaro rino.
Nhungamiro Yevatanga Kubhadhara Nguva
2021-06-21 00:04:32 | Webhusaiti
Unoziva sei kuti iyo vhiki nevhiki, bi-vhiki nevhiki, bi-vhiki yekubhadhara nguva, kana kunyangwe mubatanidzwa weaya matatu angave ari akanyanya kunaka nguva yekubhadhara bhizinesi rako? Zvinhu zvakaita sekufarirwa nevashandi nemitemo yevashandi zvinoonekwa zviri pachena. Asi iwe zvakare unoda frequ...
Gwaro rekutanga revashandi vari kure
2021-06-21 00:02:10 | Webhusaiti
Nepo kushanda kure kwaive pane imwe nguva kushomeka kwemabhizinesi, izvi zvachinja zvakanyanya munhoroondo yazvino. Zvidzidzo zvakaitwa naStanford economist Nicholas Bloom zvinoratidza kuti kubva muna Chikumi 2020, 42% yevashandi muUnited States vaishanda kubva kumba nguva yakazara. Nepo iwo manhamb...
Gadzira peji rakagadziriswa rekumusoro uchishandisa zvinokonzeresa zvepfungwa
2021-06-20 08:35:45 | Webhusaiti
Chinangwa chepeji rekumisikidza ndechekutora vashanyi kuti vatore danho, kunyangwe kutenga chigadzirwa, kujoina rondedzero yeemail, kutanga muyedzo wakasununguka, kana chimwewo chinhu. Asi kunge chero chinangwa, haufanire kungo "tarisa "kuti zvichaitika. Unoda zano rinotungamira vashanyi kuti vatore...
Maitiro ekumisikidza mushandi mabhenefiti
2021-06-19 20:20:25 | Webhusaiti
Zvisinei nehukuru hwebhizinesi, imwe yedzakanakisa nzira dzekuchengeta vashandi vachifara, vakavimbika uye vachibudirira ndeyakanakisa mapakeji mapakeji. Mabhenefiti avo, kana kana marekodhi ebhenefiti asina kukodzera, zvinoshungurudza mapato ese ari maviri. Kuva nehurongwa hwakajeka hwekumisikidza ...
Nhungamiro Yekutanga kune Vashandi Bonus Plans
2021-06-19 20:14:32 | Webhusaiti
Zvirongwa zvebhonasi zvevashandi inzira huru yekukurudzira vashandi vako kuti vavandudze kana kuchengetedza mashandiro avo pabasa kuitira kuti vawane zvinangwa zvebhizimusi zvitsva. Asi kuvaka chirongwa chebhonasi yevashandi chakaringana uye chinokurudzira chinogona kubatsira. mikana yakaenzana yeva...
5 akanakisa emubatanidzwa link masking plugins (+ 3 matipi ekuwedzera kutengesa)
2021-06-19 14:51:13 | Webhusaiti
Kutsvaga yakanakisa yakabatana yekubatanidza masking plugins kune yako WordPress saiti, asi usina chokwadi nezve sarudzo yakanakisa? Kushamwaridzana kushambadzira inogona kuve imwe yenzira dzinobatsira kwazvo kugadzira mari yekungotenga mari Asi paunenge uchibatanidza zvinongedzo zvehukama mune zvem...
34 akanakisa emazwi ezviitiko zvemitambo muna 2021
2021-06-19 05:39:31 | Webhusaiti
Makachengetera mutauri. Wakakiya nzvimbo. Karenda yacho yakarongerwa T. Waita rondedzero yevaenzi uye wagadzirira kutumira makadhi ako. Iye zvino zvese zvaunofanirwa kuita kushambadza chiitiko chako chazvino, uye ndeipi nzira iri nani yekuita izvozvo pane kungoita webhusaiti imwechete? Vhoti...
2021-06-19 05:29:03 | Webhusaiti
Pinterest ine vangangoita mazana mashanu emamirioni evashandisi vanoshanda pamwedzi, ichiiita imwe yemasocial media masosi epasirese uye sarudzo yepamusoro yekutyaira traffic inokodzera kune yako WordPress webhusaiti. Anoshanda Pinterest nyanzvi, unogona kusimudzira webhusaiti yako pane ino inowedze...
2021-06-18 13:42:39 | Webhusaiti
Yakanakisa Shopify Shanduko Yekuwedzera Anochengetera Themes Kuwedzera Revenue Mabhizinesi akatsaurirwa kune chero micro-niche anova anozivikanwa uye anoshanda kana ivo varipo pawebhu. Kutsvaga kweGoogle ndiyo nzvimbo yekutanga mutengi wemazuvano anoreva kana achitsvaga chaicho chigadzirwa kana sevh...
2021-06-18 13:37:57 | Webhusaiti
Kufunga nezvekugadzira hwindo revatengi mune rako IT bhizinesi? Tevere, iwe unofanirwa kuve neshuwa kuti yako webhusaiti iri kukushandira iwe. Unoda kumwe kufemerwa? Nekuchenjera pfuura nepakati pekuunganidzwa kwemakomputa WordPress madingindira pazasi uye tarisa kana paine chimwe chinhu chako. Iyo ...
2021-06-18 13:31:46 | Webhusaiti
Kuve unogadzira wega senge iwe, zvakakosha kuti ubatsire iwe kugadzira shaya-kudonhedza webhusaiti uchishandisa imwe yeakanakisa emawadhi webhusaiti matemplate atakakugadzirira. vasipo Ratidza tarenda rako rinopenga uye basa rakatanhamara uye ita kuti mapurojekiti aite nerubatsiro rwekumanikidza web...
2021-06-18 13:19:16 | Webhusaiti
Vakasikwa vanhu, vamiririri, mabhizinesi nemakambani, nyanzvi webhusaiti matemplate akagadzirira kuvashandura kuti ave anoshanda mawebhusaiti. Wedzera kusvika kwako uye wedzera kugona kwako kusvika padanho repamusoro. Nemazana, kana zvisiri zviuru zvezvigadzirwa zviripo, takaisa pamwechete runyorwa ...
Nhungamiro Yekutanga kuHuman Resources Mabasa
2021-06-17 05:35:35 | Webhusaiti
Kukosha kweHR mubhizinesi kunowanzo kushomeka. Iri rimwe remadhipatimendi akatsoropodza nekuti mabasa anowira pasi peboka reHR chikamu chakakosha chebhizinesi rega rega. HR ndiyo yekutanga poindi yekutanga yekutaurirana yebhizinesi, uye nhanho yega yega inoitika munzira, kusanganisira kukwidziridzwa...
Maitiro ekugadzira bhajeti yemubhadharo
2021-06-17 04:50:29 | Webhusaiti
Payroll ingangodaro iri rimwe remabhizimusi makuru kubhadharisa, kazhinji kuverenga kweanosvika makumi maviri muzana ezvemubhadharo wesangano. Kuregeredza ichi chakakomba mutsetse chinhu chinogona kukurumidza kutungamira kune isingadzoreke kumhepo mumutengo wekuita bhizinesi. Uine vashandi vanoshand...
2021-06-17 04:05:19 | Webhusaiti
MyCompanyWorks anga aripo kweanoda kusvika makumi maviri emakore. Kwemakore, ivo vakabatsira kuumba mabhizimusi anopfuura makumi matanhatu ezviuru munzvimbo dzakasiyana siyana maindasitiri mumatunhu ese makumi mashanu. Vanopa mabhizimusi ekutanga mabhizimusi ema LLC, maC makambani, nemasangano eS. R...